Soo Saaraha Maqaarka Shiinaha ee Alaab-qeybiye &. | Roc
ROCPLEX maqaarrada albaabka oo qiyaastii ah 80 lammaane oo ah qaab caaryo ah oo aan gacanta ku hayno, waxaan ku qancin karnaa ficil ahaan dhammaan codsiyada macaamiisha ee la xiriira noocyada caadiga ah ee alwaaxda iyo midabaynta loo qaabeeyey maqaarkeenna 'ROCPLEX® Door Skins'.
ROCPLEX maqaarka albaabka oo ay weheliso ilaa 80 lammaane oo ah qaabka caaryada ee qashinkeena, waxaan ku qancin karnaa ficil ahaan dhammaan codsiyada macaamiisha ee la xiriira noocyada caadiga ah ee alwaaxda iyo midabaynta loo qaabeeyey maqaarkeena 'ROCPLEX® Door'.
Waa lagaa siin karaa wixii qaab ah iyo midabbo loo baahan yahay. Noocyadeena jira ee ka badan 1200 qurxinta alwaaxda iyo / ama midabbada uni ayaa la heli karaa wakhti kasta.
Lacagta ugu dambeysa ee qurxinta alwaaxda midabada badan iyo midabada Adeegga loo yaqaan 'Tailor-made service': Xarunteena farsamada waxaa lagu qalabeeyay xarun shaybaar oo noo sahleysa inaan abuurno ku dhowaad qaab kasta oo macaamilku doonayo.
Falanqeyn dheeri ah ayaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanayo mashiinada alwaaxa iyo qalabka caadiga ah. Waa inaad horay u sii wadataa tijaabooyinkaaga iyo tijaabooyinkaaga.
Iswaafajinta bey'adda ee 'ROCPLEX Sk Door Skins' waxay ka bilaabmaysaa qalabka bey'adda u habboon ee la isticmaalay, sida alwaaxda aan la daaweyn iyo wakiillada qabashada-hooseeya ee formaldehyde, waxayna ku dhammaaneysaa habka wax soosaarka bey'adeed iyo debecsan. Lacquering waxaa lagu sameeyaa hab bey'adeed u fiican, iyadoo la adeegsanayo emulsions biyo ku saleysan oo keliya.
Maqaarka albaabka ROCPLEX, albaabka albaabka lagu xardhay Veneer Dabiiciga ah ama Melamine (ash, teak, geed cas, EP teak, sapele, oak cad, beech, mahogany iwm)
Qalabka muhiimka ah wuxuu sameyn karaa HDF ama plywood.
Cabbirka Maqaarka ee 'ROCPLEX'
ROCPLEX Maqaarka Maqaarka Maqaarka Caamka ah
Qaabka Maqaarka Albaabka
Hore: Plywood Ganacsi
Xiga: Filim Soo Wajahday Plywood